Mas'uuliyadda hoosaad ee wada-hawlgalayaasha noocyada shirkadaha | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Mas'uuliyadda hoosaad ee wada-hawlgalayaasha noocyada shirkadaha
La Mas'uuliyadda hoosaad, waxay ku shaqeysaa dabeecadda ka-reebitaanka iyo hab haraaga ah markii ugu dambeysay markii ay jirto lacag-bixin dhinaca shirkadda ah.
Hadday, markii deyntaani ay tahay, shirkadda, oo ah deynta ugu weyn, aysan u hoggaansamin waajibaadka lacag-bixinta, markaa waxay u adeegsan kartaa dalab bixinta lacag-bixinta maamule hoosaadyo xiriir la leh shirkadda.
Tan waxaa la sameyn doonaa ilaa iyo inta deyn bixiyuhu muujiyo in shaqada lacag bixinta ee shirkaddu leedahay maadaama deyn bixiyaha ugu weyn uu ku guuldareystay dhowr isku day, iyo in aysan runtii awoodin inay xalliso dhibaatada ama ay gudato waajibaadkeeda u dhigma.
1 Maxaa badanaa lagu gartaa mas'uuliyadda is-beddelka?
2 Tusaale Mas'uuliyadda hoosaad
3 Caqli dhaqaale
4 Masuuliyad shaqsiyeed
5 Mas'uuliyad wadajir ah
6 Masuuliyad aan xadidnayn
7 Masuuliyad hoosaad
8 Saamaynta isbeddelka ku yimaada lamaanayaasha
Maxaa badanaa lagu gartaa mas'uuliyadda is-beddelka?
Waxaa lagu gartaa asal ahaan iyada oo ah mid ka mid ah wadarta deynta shirkadda la dalban karo, ee deyn hoosaadyo, kaliya haddii ay dhacdo in la isku dayay in la soo uruuriyo deynta, iyada oo aan wax guul ah laga gaarin isku dayga.
Taasi waa marka deynta hoosaadku waa inuu ka jawaabaa, marka kaliya ee deynta ugu weyn, ee ah, shirkadda guud ahaan, aysan awoodin inay dhaqaale ahaan uga jawaabto dhibaatada ay soo bandhigtay shirkadda.
Tani waa sababta, haddii shirkad kugu leedahay lacag xadidan, waa inaad isku daydaa inaad uruuriso dhowr jeer, adoo hubinaya in bulshada aysan ka jawaabin, waa marka ay tahay inaad la kulanto caddayntan oo aad bilaabi karto sheegasho masuuliyad khiyaali ah taasi waxay leeyihiin xubnahaas bulshada ee deymaha ay shirkaddu heshay.
Mas'uuliyadda hoosaad, sida lagu aasaasay Sharciga 58/2003, Canshuurta Guud, waa masuuliyadaas oo ku dhacda qofka markay jirto jebinta qandaraaska dhinac saddexaad ee urur.
Tusaale Mas'uuliyadda hoosaad
Tusaale ahaan, shirkaddu waa maamule hoosaad marka qandaraaslaha tooska ah ee shaqaalaha, uusan u hoggaansamin waajibaadka shaqada iyo amniga bulshada ee ka saaran shaqaalahooda.
Tani mas'uuliyadda hoosaad wuxuu ku dhacaa qofkii bixin waayey deyn koox saddexaad ay bixisay. Aaggan, iyadoo ay ugu wacan tahay xaqiiqda ah in deynta uusan dalban karin milkiilaha isla, kan waajibaadka bixinta kuwa loo qoondeeyay qandaraaska ama, ku guuldareysta taas, kuwaas oo sharciga u dhigma ay u go'aaminayaan inay yihiin dammaanad qaadaha.
Si aad u sii qeexdo, tani macnaheedu maahan taas deynta waxay u gudubtaa gacanta qof saddexaad, maadaama qofka kaliya ee mas'uulka ka ah kaliya loo baahan karo inuu bixiyo, laakiin haddii mas'uuliyaddan lagu xusay qandaraaska, waxay noqon doontaa in loo hoggaansamo si sharci ah, si loo caddeeyo qodobkan sii, waa in la ogaadaa in masuuliyada wada-hawlgalayaasha ka dhex jira koox ama urur es:
Qodobka 127 C. de C. si kooban ayaa go'aaminaya taas Dhammaan wada-hawlgalayaasha qayb ka ah iskaashiga wadajirka ah ayaa shaqsiyan iyo si wada jir ah waajib ugu ah, dhammaan hantidooda ay leeyihiin, hawlgallada ka dhasha ee lagu fuliyo magaca iyo magaca ururka, ee ay ku saxeexan tahay, taas oo ay tahay inaad uga jawaabto dhammaantood haddii aad xiriir la leedahay, maadaama faa'iidooyinka iyo khasaaraha labaduba waa la wadaagayaa.
Sidoo kale, farshaxanka 237 C. de C. dejisaa taas hantida ama hantida shaqsiyadeed ee wada-hawlgalayaasha guud kuwaas oo aan ku jirin hantida ururka markii la aasaasay, lama iibin karo bixinta waajibaadka ama deynta ay shirkaddu qandaraaska kula gashay, laakiin ka dib markay sameeyeen wadarta iibka hantida ay leedahay shirkaddu.
La mas'uuliyadda dhammaan wada-hawlgalayaasha Waxaa ka mid ah tan lagu aasaasay qandaraasyada, ta falalka sharci darrada ah iyo mas'uuliyadda sharciga ah.
Wada-hawlgalayaasha iska leh SL iyo SA waxay helayaan mas'uuliyad xaddidan waqtiga u gudbinta taliska caasimada.
Dhanka kale, Iskaashatooyinka wadajirka ah kuma xirna nidaam isla mid ahSidaa darteed, dhinacyada saddexaad ayaa looga tagayaa iyaga oo aan la ilaalin karin haddii ay dhacaan dhibaatooyin dhaqaale, gaar ahaan kuwa ay ugu wacan tahay mas'uuliyadda jirdil ee aan fursad u helin inay doortaan kuwa deynta ku leh.
Sidaa darteed, bulshada wadajirka ahi waxay bixisaa nidaam dabacsan oo aad u tayo badan, kaas oo isla markaa dejiya a masuuliyad aan xadidnayn oo xubnaheeda ah.
Wada-hawlgalayaashu kama mid aha cilaaqaadka qandaraaska ee shirkadda ama shirkadda ay la leedahay dhinacyo saddexaad, sidaas darteed mas'uuliyadaha wareejinta kama imaaneyso cilaaqaadka noocaas ah.
Xaqiiqdii, gebi ahaanba ka soo horjeedka ayaa dhacaya, sharciga ayaa dejinaya mas'uuliyad ujeedadeedu tahay in la ilaaliyo dhinacyada saddexaad ee ay saameyn karto. Sidaa darteed, nidaam qasab ah ayaa la aasaasay.
Mas'uuliyadda wada-hawlgalayaasha ayaa ka sarreeya tan shirkadda lafteeda, hab sidan oo kale ah oo ay isku mid u tahay dammaanadda. Sababta sababta, waa lagu dabaqi karaa mutatis mutandis, iyo sidoo kale qawaaniinta qaarkood ee Xeerka Madaniga ee Isbaanishka, kuwa la xiriira dammaanadda, badanaa kuwa wax ka qabta qalabka.
Dhammaad, mas'uuliyadda shakhsi ahaaneed, Kaliya waxay u kacdaa magdhowga waxyeelada mana ku qasbayso kan dambe inuu u hoggaansamo qandaraaska gaarka ah ee u dhexeeya shirkadda iyo kooxda saddexaad.
Mas'uuliyad wadajir ah
Mas'uuliyadda wada-hawlgalayaasha shirkaddu waa wada jir, taas oo u oggolaaneysa deyn bixiyuhu inuu si bilaash ah u isticmaalo doorashada ius, taasi waa, waad sheegan kartaa lammaane kasta oo aad dooratid oo bixiya deynta oo dhan iyo ius variandi, oo macnaheedu yahay in lamaanaha sheeganaya deynta uu is beddeli karo sababo kala duwan awgood.
The Nidaamka wadajirka ah ee wadajirka ah ee Xeerka Madaniga ah. Waxa ugu cajaa’ibka badan ee ku saabsan masuuliyadan ayaa ah in wadajirka lagu garto ka faa’iideysiga xiriirka dibadda, laakiin had iyo jeer tixgelin ma siinayo xiriirka gudaha, u dhexeeya wada-hawlgalayaasha deynta.
Midka koowaad, rafiiqa ayaa leh suurtogalnimada inuu dalbado magdhowga wixii uu bixiyay oo si wada jir ah oo dhowr ah loogu leeyahay deyn bixiye, maadaama waajibaadka iyo deyntu ay iska leeyihiin shirkadda, taas oo ah, dhammaan la-hawlgalayaasheeda qaybteeda saami ahaan.
Waa a nooca mas'uuliyadaha kumeelgaarka ah oo ayna ilaalinaynin hay'ad kasta, laakiin waa go'aan ay wada-hawlgalayaashu xor u yihiin inay doortaan nidaamka gudaha ee saamiyada mas'uuliyadaha dhaqaalaha lagu wadaagi doono.
Masuuliyad aan xadidnayn
en el Qodobka 127 ee Xeerka Madaniga waxaa la xaqiijiyey in wada-hawlgalayaashu waxay ka jawaabaan dhammaan hantidooda, hadda iyo mustaqbalka. Waxay u dhacdaa si ka soo horjeedka kiisaska ah in wada-hawlgalayaasha SL ama SA, maadaama halkan mas'uuliyadda aan ku xaddidnayn waxa lagu darsaday inay tahay qiime raasamaal
en el Qodobka 237 Waxaa la oggol yahay in deyn-bixiyeyaasha shirkaddu lagu hagaajin karo shuraakada kiiska keliya ee ay marmarsiiyo uga heleen hantida bulshada, si kale haddii loo dhigo, waa marka shirkaddu aysan lahayn go'doomin ay ku bixiso deynta heshiiska lagu galay.
Maqaalkani wuxuu siinayaa la-hawlgalayaasha faa'iido u gaar ah dalxiis analog ah inaad awoodi doonto inaad adeegsato dammaanad qaadaha.
Xaaladdan oo kale, deyn bixiyuhu wuu dacweyn karaa labada dhinacba, isagoo ku tiirsan faa'iidada cudurdaarka ee marxaladda fulinta. Lammaanuhu wuu difaaci karaa qabashada hantidooda isagoo u muujinaya dayn bixiyeha hantida ay shirkaddu leedahay, sidaas darteed deyn bixiyuhu waa inuu marka hore qaataa kuwan si uu u dejiyo deynta oo haddii kuwani aysan ku filnayn, waxay noqon laheyd in hantida shaqsiyadeed ee wada-hawlgalayaasha, iswaafajinta ama cuna-qabateynta.
Nidaamkan waxaa loogu talagalay ujeedada dhiirigelinta lamaanaha, taas oo sida muuqata macluumaad ka badan deyn bixiyaha la xiriirta hantida shirkadda ay deynta ku dejin karto, iskaashi iyo xawaareyn ku sameyn karto dhammaan howlaha si deyn bixiyuhu u helo lacag bixin sida ugu dhakhsaha badan, halkii uu ku khasbi lahaa deynta ama qareenkaaga in la raadiyo hantida ay shirkaddu diiwaangelisay, iyadoo ku lumisay waqti badan, lacag iyo dadaal badan.
Saamaynta isbeddelka ku yimaada lamaanayaasha
El lammaane imanaya, kahadalka shirkad horey loo qaabeeyey, waa lammaane ku biira urur isla markaaba hela masuuliyado dhinacyo kala duwan leh, inta badan deymaha jira xilligii ku biirista shirkadda iyo deymaha mustaqbalka.
El lammaanaha shaqada ka tagaya, taasi waa, qofka ka tagay shirkad shaqeyneysa, waa inuu ku jawaabaa qeybtiisa saami ee deynta markii uu baxayay, maaddaama qodobka 1205 ee Xeerka Madaniga uu qeexayo in wadarta oggolaanshaha deyn bixiyuhu ay lagama maarmaan u tahay fulinta novation loo baahan yahay si looga sii daayo lammaanaha deynta mustaqbalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Noticias » Mas'uuliyadda hoosaad ee wada-hawlgalayaasha noocyada shirkadaha
Qaybta dhismaha guryaha ee maalgashiga oo dib loo eegayo